ကုန်သည် ၇သန်းရှိသွားပါပြီ! အထူးဖောက်သည်ကိုတွ့လိုက်ပါ။
အရောင်းအဝယ်သမားများ ၉ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျော်
FBS မှစံချိန်သစ်တင်လိုက်ပါပြီ! စုစုပေါင်းထရိတ်ဒါဦးရေ ၇ သန်း ရှိသွားပါပြီ။ ဒီ့အတွက်ငါတို့အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကံထူးရှင် ၇သန်းမြောက် ထရိတ်ဒါကို FBS အဖွဲ့မှ ကြိုဆိုပါတယ်!
အီဂျစ်မှ မစ္စတာ Abdelrashed Eldamerdash Hamed Elsayed ဖြစ်ပါတယ်!
မစ္စတာ Abdelrashed ဟာ Forex အရောင်းအဝယ်လုပ်လာတာ တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး၊ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က FBS မှာအကောင့်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ ချက်ချင်းပဲ အောင်မြင်မှုရပြီး၊ သမိုင်းဝင် ထရိတ်ဒါတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဒေါ်လာ ၅၀ အပိုဆုကြေးငွေက သူ့ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက် FBS ကိုပူးပေါင်းဖို့ သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စရံငွေမလိုတဲ့ ဒေါ်လာ ၅၀ အပိုဆုကြေး အကောင့်ဖွင့်ပြီး သင့်ပွဲစားဆီမှ ဆုလက်ဆောင်ရွေးချယ်ဖို့ ဖုန်းလက်ခံရရှိတာကို တွေးကြည့်ရုံနဲ့ အရမ်းကိုကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ အံ့အားသင့်စေခြင်းပါပဲ။
မစ္စတာ Abdelrashed ဘယ်လက်ဆောင်ကိုရွေးခဲ့သလဲ? ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အကြောင်းကုန် ပြောပြပါ့မယ်။
ဆုရရှိသူများကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်! ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း မကြာခင်လာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြင်ဆင်မွမ်းမံချက်များကို လိုက်နာပြီး မှတ်သားထားပါ - FBS ဟာ အလွန်အကျွံ တောင်းတဲ့ဆုတွေကိုတောင်မှ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်။
FBSမှ ‘Best Copy Trading Application Global-2018’ ဆု လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်
နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး မဂ္ဂဇင်းမှ FBS CopyTrade အား Best Copy Trading Application Global-2018 အဖြစ် အမည်တွင်စေခဲ့ပါသည်!
၉သန်းမြောက် ရောင်းဝယ်သူကို ကြိုဆိုရန် FBSမှဝမ်းမြောက်လျှက်ရှိပါတယ်!
ခုဆို နောက်ဆုံးတော့ ဆုအတွက်အချိန်ကျပါပြီ!
မစ္စ Sherlani Jane Fanari သည် FBSအား ဖိလစ်ပိုင်မှ သူမမိသားစုနှင့် သူမအမေအတွက်ကူညီရာရောက်အောင် အပ်ထည်များချုပ်လုပ်ကာရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် အပ်ချုပ်စက်နှင့် ချည်ထည်များ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ "မငြင်းဆန်"နိုင်ခဲ့ပါဘူး!
bitcoin ethereum သဘော အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း litecoin dash ပထဝီဝင် နိုင်ငံရေးပညာ နယူးယောက်မြို့ရှိ ငွေကြေးလုပ်ငန်းဗဟိုဈေးကွက် ထုတ်လုပ်သည် လူသုံးကုန် စီးပွားရေး ရောင်းဝယ်သူ၏ ဝေါဟာရ လူတွေ့မေးမြန်း ဘလော့ချိန်း လူနေမှုဘဝ gold chf aud bitcoin forex exchange forex ပညာပေးသင်ကြားရေး ဥရောပ ဗဟိုဘဏ် အစည်းအဝေး သြစတြေးလျ အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ eur ကုနျသှယျရေး bitcoin အနုပညာရှငျကုနျသညျမြား nzd jpy အထိ ငွေရေးကြေးရေး ဇာတာခွင်ဟောကိန်း တရုတ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် အရောင်းအဝယ် စစ်ပွဲများ စက်မှုလုပ်ငန်း လက်လီရောင်းချသူများ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု forex factory cad အပျော် ပညာရေး ဖြစ်ထွန်းမှု dow jones usd အာရှ နည်းပညာ(ta) သုံးသပ်ချက် trend အရောင်းအဝယ် ရောင်းဝယ်သူတိုင်း သိထားသင့်သည် သတင်းများနှင့် ရောင်းဝယ်ခြင်း forex signals try လှုံ့ဆော်မှု ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး forex ကုနျသှယျ gbp အတိုးနှုန်း အမြတ် ဂျာမနီ ထိုင်ဝမ် စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက် ဈေးနှုန်းများ လူသစ်များ အရောင်းအ၀ယ် ကျွမ်းကျင်မှုများ အောင်မြင်မှု ငွေကြေးများ show all